Ilaina ny fifanakalozan-kevitra: atahorana ho very ny kolontsaina malagasy - ewa.mg
Ilaina ny fifanakalozan-kevitra: atahorana ho very ny kolontsaina malagasy
News - Ilaina ny fifanakalozan-kevitra: atahorana ho very ny kolontsaina malagasy
Maro ireo ambara fa “saropady” ka
tsy tokony horesahina any anivon’ny ankohonana, eny amin’ny
fiarahamonina, any anatina fovoriana isan-karazany rehetra any.
Matetika, maha tohina ny kolontsaina malagasy izy ireny. Iray
amin’ireny ny fanehoan-kevitra momba ny finoana. Saika ahitana
fifandonana amin’ny kolontsaina malagasy izy io ka aleon’ny
Malagasy tsy miresaka azy loatra. Izay fihetsika izay anefa no mety
hitarika any amin’ny faharavam-pototra eo amin’ny kolontsaina
malagasy raha sanatria ka manao randra-mitarika. Olon’ny teny sy ny
resaka ny Malagasy, noho izany, tsy tokony hatao ho anisan’ny
“fady” ny mifanakalo hevitra.
Matoa tonga eo amin’ny fifandirana
lalina ny resaka tahaka itony, nisy nanary ny kolontsaina sy ny
fahendrena ary ny soatoavina malagasy izay tao. Tsy fomban’ny
Malagasy ny misavoamboana, maniratsira olona, manivaiva olona, sns,
rehefa miresaka. Mahay mihaino ny Malagasy, tia mandinika ary tia
maneho hevitra ihany koa.
Tsetsatsetsa tsy aritra ny ilazana
fa tsy fomban’ny Malagasy ny “miady hevitra”. “Mifanakalo hevitra”,
io ny an’ny Malagasy. Ny fifanakalozan-kevitra no nampirindra ny
fiarahamonina malagasy fahiny. Nohalaviriny tanteraka ny hisian’ny
ady na amin’ny endriny tahaka inona na amin’ny sehatra manao
L’article Ilaina ny fifanakalozan-kevitra: atahorana ho very ny kolontsaina malagasy a été récupéré chez Newsmada.
FIKIRAKIRANA LAMAODY :: Fashion’s Passion hanomezan-danja ny famoronana vitan’ny tanora
Hotanterahina ny alahady 16 desambra ho avy izao, amin’ ny 11 ora antoandro ka hatramin’ny 8 ora alina ny andiany voalohany amin’ilay hetsika «Fashion’s Passion». Lanonana iray hampivodronana ireo tanora misehatra eo amin’ny tontolon’ny famoronana haingo sy lamaody ary havanana amin’ny fikarakarana ny hatsaran-tarehy. Eny amin’ny Délices by Art Fity, Itaosy no toerana hanatontosana izany. Maro ny zavatra ho hita eny an-toerana amin’io fotoana io , toy ny filatroana hampisehoana ny zava-bitan’ireo mpamorona haingo miisa enina mianadahy, misy an’i Nal’s mode, Missy Soa, Jorkey Emmanuel , Esther’s Garment, Lovah Nah ary Fity Rak. “Tanjona amin’io ny hampahafantarana amin’ny olona rehetra ny zava-bitan’ireo tanora misehatra eo amin’ny famoronana mba tsy ho latsa-danja amin’ny an’ny vahiny. Ezahina ho tohizana isan-taona izy io ho fanosehana ny tanora amin’ny famoronana izay ataony”, hoy i Fitia Rakotoarivelo manazava. Ankoatra izay, haneho ny talentany amin’ny fikarakarana ny tarehin’ireo mpilatro mba hampisongadina ny endriny ihany koa Rafotsigasy sy Rando Mia Stegi. Ny Doremi Events sy ny Délice by Art Fity kosa no hiantsoroka ny haingon-tsehatra. Ny Fête par Fête no hiandraikitra ny sakafo ary hampiseho ny talentany amin’io ihany koa i Antso Bonmartin. Ny NTC Gospel kosa no mpanakanto fantatra fa hanafana ny lanonana eny an-toerana amin’io. L’article FIKIRAKIRANA LAMAODY :: Fashion’s Passion hanomezan-danja ny famoronana vitan’ny tanora est apparu en premier sur AoRaha.
Mahajanga: saron’ny zandary ireo tambajotrana mpanendaka
Voasambotry ny zandary tao Tsararano Mahajanga, afakomaly, ireo tambajotrana mpanendaka miisa fito mianadahy. Raha ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, olona roa no niharan’ny asa ratsin’ireto jiolahy ireto, ny herinandro lasa teo. Mbola tompon’antoka nanindrona antsy raim-pianakaviana iray teo amin’ny tendany ao Mahajanga ihany ihany koa izy ireto. Avotra soa aman-tsara ihany ilay raim-pianakaviana rehefa nentina notsaboina teny amin’ny hopitaly. Tratra tany amin’izy ireo, nandritra ny fisavana nataon’ny zandary, ireo entana halatra marobe, toy ny telefaonina finday sy ny maro hafa. Fiaraha-miasa teo amin’ireo loharanom-baovao teo an-tanàna ihany ny nahafahana nisambotra ireto jiolahy ireto. Nohamafisin’ny zandary fa ny enina amin’ireo no tena mpanendaka raha mpivarotra entana halatra kosa ny iray. Hatolotra ny fampanoavana izy ireo aorian’ny famotoran’ny zandary. J.CL’article Mahajanga: saron’ny zandary ireo tambajotrana mpanendaka a été récupéré chez Newsmada.
Eny anivon’ny hopitaly: raikitra ny fifaninanana hahazoana ny « Label 5S »
Nampahafantarina, omaly, tetsy amin’ny HJRA Ampefiloha ny “Label 5S”, mari-pankasitrahana hametrahana ny lentan’ny hopitaly mendrika amin’ny fomba fiasa sy fanatsarana ny tontolon’ny hopitaly, ary indrindra ny fanajana ny marary…. Toky ho an’ny marary eny anivon’ny hopitaly ny hisitraka ny tontolo mirindra sy madio ary anjakan’ny fandriampahalemana sy ny fandraisana mendrika ny fametrahana ity “Label 5S” ity. Ankoatra ireo, hahamora ny fandraisana an-tanana ny marary sy ny hakingan’ny fomba fiasan’ireo mpiasan’ny fahasalamana sy ny mangarahara eo amin’ny vola ilaina ary ny vidim-panafody ihany koa izany. Fomba fiasa manaraka ny ny fitantanana tsara sy kalitao mendrika hanatsarana ny tontolon’ny asa eny anivon’ny hopitaly ny 5S Kaizen-TQM, izay nentin’ny Japoney teto Madagasikara efa hatramin’ny taona 2007. Sivanina, Sokajiana, Sasana, Soratana, Sokajiana (5S). Mila mahay manavaka tsara ny antontan-taratasy sy ny karazana fitaovana ilaina sy ny tsy ilaina. Mahay manasokajy ireo antontan-taratasy ilaina ireo amin’ny toerana tokony hisy azy ary mora ny fitadiavana azy. Mila sasana madio sy havaozina ny fitaovana mba ho azo ampiasaina avy hatrany sy ho ara-pahasalamana tokoa. Voarakitra an-tsoratra ary hatao tazan’ny maso ny fomba fiasa mba tsy hohadino… Ankoatra ireo, saintsainina avokoa ny tokony hatao ary arahina ny fitsipi-pifehezana. Amin’izao fotoana, efa mihatra amin’ny hopitaly CHU 22 sy CHRR 16 eto Madagasikara ny fomba fiasa 5S. Miitatra amin’ireo hopitaly eny anivon’ny distrika CHRD 23 ihany koa izany, amin’izao fotoana ary tonga hatreny amin’ny CSB 1654. Raha ny tombana hatao isan-taona, fantatra fa efa mahafehy ny fampiharana ity fomba fiasa 5S ity ireo mpiasan’ny hopitaly. Azo tsapain-tanana ny vokatra, indrindra ny fahitana ny fanatsarana ny fahadiovana sy ny fotodrafitrasa ary ny fanatsarana ny fandraisan’olona. Mendrika ny omen-danja izany ezaka izany entina hampaherezana ireo mpiasan’ny hopitaly ka izany indrindra no nanaovana ny “Label 5S”. Ho azon’izay hopitaly mahafeno ny fepetra, araka izany, ity “Label 5S” ity. Anisan’ny fepetyra voalohany fampiharana ny 5S amin’ireo sampan-draharaha rehetra ao amin’ny hopitaly. Tokony hahafa-po ny fampiharana ny 80% io 5S io. Mahasahy manao fanamby fa hahavita hitazona ao anatin’ny roa taona io fomba fiasa io ary hahatratra ny fenitry ny kalitao “Kaizen”. Manokatra fijery hafa ho an’ny mpitazana ny fahazoan’izay hopitaly mendrika ity “Label 5S” ity. Toy ny dokambarotra ho an’ny hopitaly ihany koa izany, manoloana ny marary sy ireo mpiara-miombon’antoka. Hanomboka amin’ny voalohan’ny taona 2019 ny fanombohan’ny fangatahana ity mari-pankasitrahana “Label 5S” ity. Tatiana AL’article Eny anivon’ny hopitaly: raikitra ny fifaninanana hahazoana ny « Label 5S » a été récupéré chez Newsmada.
Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria 67, afakomaly ny jiolahy iray malaza ratsy amin’ny fanendahana sy fanaovana sinto-mahery eny 67 ha sy ny manodidina. Niainga avy amin’ny fitarainana nataon’ny lehilahy iray lasibatry ny fanendahana no nahafahan’ny polisy nanao ny fanarahan-dia sy ny vela-pandrika teny an-toerana. Nendahin’ilay jiolahy tao anaty fiara ny telefaonina avolenta niaraka tamin’ny vola. Nitsoaka avy hatrany ka nanenjika ity jiolahy ity ny polisy. Niaiky ny heloka vitany izy ka naiditra am-ponja vonjimaika. Mitohy ny fanaraha-maso ataon’ny polisy satria isan’ireo faritra malaza ratsy amin’ny fanendahana sy ny sinto-mahery iny faritra 67 ha iny. L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.